Izinkukhu izitsha. Indlela apheke ihansi
Ukudla kanye iziphuzo, Ukupheka Tips
UGus ubelokhu imenze etafuleni ngamaholide ezinkulu. Namuhla, leli siko liyaphila kanye naphakade. Ngaphezu nezinsuku ezinkulu futhi ezibalulekile, ihansi okulungiselelwe kanye emihlanganweni encane emkhayeni. Ukuze sijabulise abathandekayo babo esiphundu kuphekwe ukudla ihansi, ulalele izincomo zethu, kanye nomndeni wakho ngeke umangale.
Ngakolunye uhlangothi, amanoni ihansi inyama, ngokushesha kuvela okugazingiwe futhi cishe njalo namanzi. Kodwa lo yinkimbinkimbi inqubo ukuthi ihansi - inyoni kunalokho enkulu, futhi kunzima ngempela ukubeka it kuhhavini. Yiqiniso, emcimbini umndeni, ungakwazi ukupheka the ihansi zibe yizicucu, kodwa ngezikhathi ezikhethekile inyoni Bhaka kangcono ngokuphelele.
Manje ngqo sendlela ukulungiselela ihansi. Okokuqala okudingeka aphathe lezidumbu sithathe ukugcwaliswa afanele wakhe. Kubalulekile ukuthi inqubo yokuwugazinga isikhumba akuyona ubunile, ngesikhathi esifanayo inyama ngokuphelele propeklos.
Ukuze ukuthambisa inyama, ihansi isidumbu kufanele ukukuthinta izinongo usawoti, futhi endaweni enjalo ngosuku - ezimbili efrijini. Gourmet uncamela uthele ngaphambilini yashizi usawoti isidumbu iwayini (omhlophe kuphela), zihambisana ukugoqa plastic, ushiya endaweni epholile amahora ayisithupha. Phakathi nalesi sikhathi, inyama kuyodingeka isikhathi sokufundisa kuphela babe ethambile, kodwa futhi ligcwele iphunga zamakha. Ulandela ukuthosa lamahwahwa uzazuza athobele ukugxusha, okuzokwenza ukukuqonda. Noma zifakwe emanzini anosawoti isidumbu ngaphakathi.
Ukuze ukugxusha livame ukusetshenziswa amakhowe kanye nokunye okufana nokolweni, irayisi ne kancane omisiwe noma ulamula ne isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kanye anyanisi. I version zakudala - apula. Njengoba kuchazwe ukugcwaliswa, ke eyayigcwele ihansi isidumbu, futhi esiswini is sutured. Paws kufanele nakanjani tie, ngakho musa mbeni izindonga kuhhavini. Izikhumba kufanele ohlehliswe ezindaweni eziningana ukuvumela amanoni umongozima ngokukhululekile. Manje isikhumba kungenziwa nivame imayonnaise (noma uwoyela) futhi ubeke ihansi phezu bhaka. Kuyinto efiselekayo ukuthi pan kwaba amabhampa ezijulile futhi iqoqo amafutha. Fit ongaphakeme roaster. Ukuthululela phansi pan amanzi kancane bese uyifake endaweni ihansi, ibekwe kuhhavini, osuke usushisa kakade ukuba 180-200 degrees. Ilungiselela inyoni cishe kwamahora amathathu, kodwa kubalulekile ukuba ngezikhathi nisela angawodwa therefrom juice namafutha ukuba isidumbu ayizange ezomile.
Indlela apheke ihansi nge-apula
Lena iresiphi yakudala ihansi, ephekwe eziko, kakhulu futhi ethandwa phakathi besifazane ngoba ukunambitheka enkulu kanye nephunga elimnandi a izitsha mouthwatering. Umbuzo "kanjani ukuba apheke ihansi nge-apula?" Singasho kugcwale umlomo ukuthi lesi kwenziwa kakhulu ukumane. Kubalulekile ukuthi le nyoni wayengemdala. Apples zingcono ukukhetha ifemu ephethe ukunambitheka kancane omuncu. I acid kusiza iwukudambisa fat ngokweqile.
Preformed ihansi isidumbu bakuthinte usawoti kanye ingxube emnyama futhi oregano. Shiya imizuzu engamashumi amane ukunceliswa nephunga elimnandi namakha. Zilungiselele ngokugcwalisa apula (Antonovka - ukukhetha okuhle) nihlanze bese uthathe amakota, nokususa pods imbewu.
Kusukela apula isidumbu, esiswini is sutured ngentambo nokhahlo eqinile. Omama abaningi abasemakhaya kunezelwa apula amaqatha ambalwa ulamula, okuvumela ihansi amanzi okugqumisa ngaphakathi ngokushesha.
Ukuze ihansi yakho Kwatholakala okumnandi, nokuthi zazingekho nezinkinga kombhala yayo ngesikhathi senqubo ukuthosa, kudingeka sithathe izitsha ngendlela efanele. Lowo ezifanele kakhulu kuyoba ikhanzi (eyigugu) noma roaster sobumba.
Ukuthululela phansi ingilazi izitsha ngamanzi wabeka therein ihansi isidumbu (emuva phansi) bese efakwa kuhhavini osuke usushisa kakade 250 degrees. Ngemva kwemizuzu engu-amathathu, izinga lokushisa eziko yehliselwa degrees 180. Fry ihansi nengxenye amahora amathathu. Isikhathi incike nenkundla ihansi.
Njalo ngamaminithi angu-amathathu ihansi isidumbu Pheqa futhi uthele amafutha drips uma ukuthosa. Kwaphela imizuzu engu-amane kwaze kwaba njengoba ihansi yakho isilungile kufanele abeke amazambane kanye apula, okuyinto kamuva asetshenziswa njengendlela Hlobisa.
Eyosiwe ihansi walala isidlo, ehlotshiswe imifino. Ezinhlangothini obkladyvayut apula nezitini kanye amazambane uphake.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela apheke ihansi kuhhavini. Sithemba ukuthi izindlela zethu oye wakusiza ukujabulisa umndeni isidlo esisha esihlwabusayo. Futhi manje umbuzo mayelana nendlela ukulungiselela ihansi, ungaphendula ngegama elilodwa - "! A"
Potato isinkwa umenzi isinkwa
Yini ukupheka yesibili fast and okumnandi lazy umyeni unkosikazi
Izindlela ezine kanjani wokukucima iklabishi Multivarki
Indlela ukupheka inkukhu gizzards?
Indlela okumnandi roll birch ubisi: ezinye izincomo
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kwakubangelwa ukuba ukuphila okumnandi
Ezokuthutha abahlukahlukene izingane: uhlu, incazelo kanye nezici
L. M. Leonov - "Golden senqola": Isifinyezo by isahluko
Apula Kuzuze umzimba: sezindawo okumangazayo izithelo ajwayelekile
Indlela yokubhekana owayengumyeni wakhe? Indlela yokubhekana owayengumyeni wakhe?
Kista.Chto kanjani a Corpus luteum simila?
Hlobo luni izithelo pomelo? I izakhiwo izithelo pomelo. Lapho ekhula pomelo?
Tyumen, Avan umthombo: izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela ukukhetha izibani ohlangothini ukukhanya?
Imishayo Ukusekela: Izinhlobo, obandayo
Ukuhlaziya-hepatitis C: kulungiswa imiphumela
Amanzi emvula uhlelo "Metal iphrofayela": Izici
Indlela ndizela Dominican Republic ezivela eRussia?